हामीलाई किन आउँछ हाच्छ्युँ, हाच्छ्युँ गर्दा शुभ-अशुभ मान्नु सही कि गलत ? – Sodhpatra
हामीलाई किन आउँछ हाच्छ्युँ, हाच्छ्युँ गर्दा शुभ-अशुभ मान्नु सही कि गलत ?
हाच्छ्युँ आउनु एक शारीरिक प्रक्रिया हो !
प्रकाशित : २४ श्रावण २०७८, आईतवार ११:५८ August 8, 2021
हाच्छ्युँको गति सय माइल प्रतिघन्टा हुन्छ र यसका साथ करीब एक लाख कीटाणु बाहिर आउँछन् । निद्रामा हाच्छ्युँ आउँदैन किनकि सुत्दाखेरी हाच्छ्युँ गराउने नसाहरू आराम गरिरहेका हुन्छन् ।